20 ပြင်သစ် 1937 လွှတ်ပေးရန်, ဒါဂတ်စကာ
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - အာဖရိက နိုင်ငံ - ဒါဂတ်စကာ အပိုင်းအရေအတွက် * P-37 ဂုဏ်သိက္ခာ 20 ပြင်သစ် အင်္ဂလိပ် - // - 20 ပြင်သစ် နှစ် 1937 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
200 rials 1974 အီရန်
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - အာရှ နိုင်ငံ - အီရန် အပိုင်းအရေအတွက် * P-103 ဂုဏ်သိက္ခာ 200 riyals အင်္ဂလိပ် - // - 200 Rials နှစ် 1974 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
ဘာစီလိုနာတွင်ရေအားကစား 10 ယူရို 2003 ကမ္ဘာ့ဖလား - 2003, ဥရောပသမဂ္ဂ (EUR) - စျေးနှုန်းကိုအကြွေစေ့၏တန်ဖိုး
ဖျေါပွခကျြ အင်တာနက်ပေါ်ရှိစျေးနှုန်းများ ဒင်္ဂါးပြားဖျေါပွခကျြ Krause များအတွက်အခန်း KM#1094 coinage အမျိုးအစား အမှတ်ရဖွယ် အကြွေစေ့ Face € 10 ကတ်တလောက်စျေးနှုန်းများ UNC မှအဘို့ Catalog စျေးနှုန်း Krause 90,00 ဒေါ်လာ ကာယ Properties ကို Mint,: စပိန်ဝင်း၏ တော်ဝင် Mint, မိတ္တူ 30,000 များကိုသွန်းလုပ်ရညျအသှေး: သက်သေပြချက် လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ: 28.
2 တစ်ပြားမှ 1872, ထိုအကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းတန်ဖိုးကို
="center" width="100%"> ဤနှစ်တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို (က): အလက်ဇန်းဒါး II ကို Nikolaevich ပစ္စည်း: ကြေးနီ စောင်ရေ: 12.
အိုင်ဗင် Fedorov ရုရှား pervopechatnika Numismatics ၏အသေခံခြင်း၏ 1 ရူဘယ် 1983 400th နှစ်ပတ်လည်နေ့, ဆိုဗီယက်ဒင်္ဂါးပြား, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ရုရှား
သတ္တု: ကြေးနီ-နီကယ်သတ္တုစပ်အဖြူ ။ အချင်း - 31 မီလီမီတာ ။ အစွန်း -2,3mm မှာထူ။ အလေးချိန် - 12.
1988 ခုနှစ်က 100 CZK ထုတ်ပေးရေး, အဖရိုးကျွန်းစု
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - ဥရောပ နိုင်ငံ - ဖရိုး ကျွန်း အပိုင်းအရေအတွက် * P-21d ဂုဏ်သိက္ခာ 100 လောက် CZK အင်္ဂလိပ် - // - 100 လောက် Kronur နှစ် 1988 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
2 kopecks 1971 ရုရှားနိုင်ငံ - စျေးနှုန်းကိုအကြွေစေ့၏တန်ဖိုး
ဖျေါပွခကျြ အင်တာနက်ပေါ်ရှိစျေးနှုန်းများ ဒင်္ဂါးပြားဖျေါပွခကျြ Krause နံပါတ်အဘို့ Y ကို#127a Konros အရေအတွက်အပေါ် 7.